शहीद परिवार भन्छन, अब फेरि कसैको रगत नबगोस् ! - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Featured Headline1 शहीद परिवार भन्छन, अब फेरि कसैको रगत नबगोस् !
शहीद परिवार भन्छन, अब फेरि कसैको रगत नबगोस् !
Marganugamidaily प्रकाशित समय 4:53:00 PM
आँखामा आँसु ओभाइसकेको छैन उनको । आठ, सात र साढे दुई वर्षका तीन छोरी र पाँच वर्षका एक छोरा छन् । २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको मलेठमा मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीचको झडपमा घाइते भई दुई दिनपछि मृत घोषित वीरेन्द्र महतोकी पत्नी रञ्जनाकुमारी माथि परिवारको जिम्मेवारी आइलागेको छ ।
कुराकानीका क्रममा क्यामरातिर अनुहार सोझ्याउन पनि असहज मानेकी रञ्जनाकुमारीले सरकारले दिने भनेको रु. १० लाख पनि पाएकी छैनन् । कहिले नाता प्रमाणित र कहिले बसाइँसराइ जस्ता कागजपत्रको खोजी । कहिले अन्य प्रशासनिक अलमल । उनलाई सघाइदिने पनि कोही छैन । नेताहरू त एक दिन आए, समवेदना दिए, फर्के । अर्काको बारीमा किसानी कर्म नगरे बिहान–बेलुकीको दुई छाक टार्न गाह्रो छ । यो अवस्थामा एक्लै कता–कता भौंतारिनु ? चार सन्तानले घेरिएकी उनले दुःखेसो पोखिन,’घरमा अभिभावक कोही छैन । कसरी यी बालबच्चा पाल्ने ? सरकारले कतै सानोतिनो भए पनि जागिर दिए केही गुजारा हुन्थ्यो ।’
मलेठमै मारिएका सञ्जन मेहताका पिता लक्ष्मण अहिले कोही नयाँ मान्छे भेट्यो कि रुन थालिहाल्छन् । उनले भने, ‘मेरो छोरोको मूल्य १० लाख रुपैयाँ हो ? छोरो त गयो, अब मैले को–सँग के माग्ने ? जिन्दगीको कुनै भर्पाइ छ ?’ ससुरा–बुहारीबीच असमझदारी सिर्जना भएपछि सरकारले निकाशा गरेको रु. १० लाख अहिलेसम्म कसैको हात परेको छैन ।
मण्डलकी श्रीमती सोनी त यस संवाददातासँग बोल्न पनि सकिनन् । दुई छोरा र दुई छोरी छन, मण्डलका । जेठा भोलाप्रसादले घरायसी जिम्मेवारीका कारण हालै पढ्दै गरेको ९ कक्षा छाडे । आफ्नो जग्गामा मण्डल परिवारलाई कटेरो बनाउन दिएका स्थानीय कपिलेश्वर यादवले भने, ‘घर बनाउन केही जग्गा र परिवारको कुनै एक सदस्यलाई जागिर दिए यो परिवारलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’
मधेस आन्दोलनको सुरूवाती चरणमा एक दशकअघि ५ माघ ०६३ पछिका दिनमा जीवन गुमाएका शहीद परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । उनीहरूलाई दिइएको आश्वासन अहिलेसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन । ६ वटा मधेसवादी दलको मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने गरी लाठी जुलुसदेखि आम हड्तालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेदेखि यी शहीद परिवारका आँखामा जीवन गुमाएका आफन्तको अनुहार नाच्न थालेको छ । फरक यथार्थ के भने, जसले जीवन गुमाए केही मुद्दामा सहमत भए पनि आन्दोलनकारी दलसँग उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन ।
आन्दोलनको सुरूवाती चरणमा सिरहाको लहानमा मारिएका पाँचमध्ये चार जना १८ वर्षमुनिका थिए । १७ वर्षे मोहम्मद अनिश र १६ वर्षे रमेश महतो चैतमा एसएसली दिने तयारीमा थिए, माघमै आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भयो । प्रमोद सदाय ९ कक्षामा अध्ययनरत थिए भने विजय सहनी १८ वर्षका थिए । बेचन यादव ३३ वर्षका थिए । मधेसमा मानवअधिकारको अनुगमन गरिरहेको थर्ड एलाइन्स विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख रणधीर चौधरीका अनुसार, ‘०६३ यता मात्र मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश किशोर र युवा थिए, जो आफ्नो परिवारको भविष्यको सहारा पनि ।’
गुमाउनुको पीडा छँदैछ, आन्दोलनकारी दलहरूको बेवास्ता र व्यवहारले पनि परिवारजनको मन दुःखाएको छ । अनिशकी आमा बिल्टुन खातुनका अनुसार सरकारले दिएको रु. १० लाखबाट पनि छोराको सालिक बनाउने भनेर आन्दोलनकारी दलहरूले रु. १ लाख लिएर गए । किरियाकर्म र पैसाका लागि काठमाडौं आउजाउ गर्दा अर्को रु. १ लाख सकियो । छोराको पढाइ छुट्यो । श्रीमान्रुलाई कुनै जागिर दिए पनि घर चलाउन सजिलो हुन्थ्यो’, खातुनले भनिन, ‘अरू सबै शहीदका नाममा स्कूल छ, मन्दिर छ, गोलघर बनाएको छ । हाम्रो छोराको नाममा केही पनि छैन ।’ पाँचै जना शहीद परिवारबाट तत्कालीन मधेस आन्दोलन संघर्ष समितिले रु. १–१ लाख उठाएर लहान बजारमा सालिक बनाएको छ । विभिन्न विद्यालयको नामको अगाडि अन्य चार शहीदको नाम जोडिएको छ । रमेशको नाममा त ‘मधेसी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान’ नै छ ।
विडम्बना न विद्यालय, न प्रतिष्ठानमै सम्बन्धित परिवारको प्रतिनिधित्व छ । रमेशका भाइ बालकृष्ण भन्छन, ‘स्कूलमा तीन वर्ष क्लर्कको जागिर दिए तर पैसा नदिई निकालिदिए ।’ बुवा रवि महतो त नेताहरूको व्यवहारबाटै आजित छन् । मधेसका ठूला नेताहरू नवराजपुर गाउँपालिका–५ मझौडा गाउँस्थित उनकै घरको बाटो काटेर जान्छन् तर पस्दैनन् । ‘चुनावमा भोट माग्न त आउलान, त्यसबेला मेरो छोरोको सहादतको हिसाब माग्छु’, उनले भने । अर्का छोरा बालकृष्णलाई जागिर मात्र दिए पनि ठूलो राहत हुने आमा रानोदेवीले बताइन् । पीडित परिवारको हितमा कुनै काम नभएको परिवारजनको गुनासो छ । प्रतिष्ठानको आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी नभए पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आएको तर त्यो रकम स्मारिका प्रकाशन र डकुमेन्ट्री बनाएर सीडी वितरणमै सकियो ।
प्रतिष्ठानका तत्कालीन महासचिव राकेश गुप्ता रोशन प्रतिष्ठानका नाममा पैसा आएको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘ठ्याक्कै कति रकम आएको थियो थाहा भएन तर आएको पैसाबाट हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका, घाइते भएकाहरूको विवरण संकलन गरेर स्मारिका निकाल्यौं । मधेस आन्दोलनमाथि डकुमेन्ट्री बनाएर सीडीहरू वितरण ग¥यौं ।’ संघीय समाजवादी फोरमसम्बद्ध पूर्वसभासद् राजलाल यादव प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छन् । मुसहर बस्तीका बालेश्वर सदाय खेती–किसानी गरेर दुई छाक टार्न धौ–धौ परेको बताउँछन् । उनका छोरा प्रमोदका नाममा पनि स्कूल छ, तर त्यसमा परिवारका कसैको प्रतिनिधित्व छैन ।
सालिक बनाउन भनेर रु. १ लाख लगे, किरियाकर्म र पैसाका लागि धाउँदा थप रु. १ लाख जति नै खर्च भयो’, उनले भने । प्रमोदकी आमा धनमादेवी सदाय आफूहरूलाई गरिब र तल्लो जातको भनेर पनि नेताहरूले बेवास्ता गरेको ठान्छिन् । भन्छिन, ‘कमजोर अवस्था छ, मुसहर समुदायबाट छौं । सानो जाति भनेर पनि हामीलाई हेलाँ गरे ।’
हरेक वर्ष माघ ५ गते नेताहरू लहानस्थित शहीदको सालिकमा जम्मा हुन्छन् । ‘बलिदानी दिवस’ मनाउँछन, भाषण गर्छन् र फर्कन्छन् । ‘माघ ५ गते नेताहरू बजारमा आउँछन, त्यहीं गएको बेला भेट हुन्छ । अरू बेला आउँदैनन’, प्रमोदका पिता बालेश्वरले भने ।
शुरूका केही वर्ष माघ ५ गतेको कार्यक्रममा शहीद परिवार आकर्षणका केन्द्र हुन्थे । कार्यक्रममा उनीहरूलाई महत्व दिइन्थ्यो । यादव भन्छन, ‘हिजोआज उनीहरूलाई कसैले वास्ता गर्दैन । आफैं आउँछन्, आफन्तका सालिकमा माला, अबिर लगाइदिन्छन् र फर्कन्छन् ।’
६ महीनापछि नै नेताहरूले वास्ता गर्न छाडे । उनले भनिन, ‘आफ्नो छोराको सालिक छ । नेताहरूले नबोलाए पनि माघ ५ गते त्यहाँ पुगेर माला लगाइदिएर फर्कन्छौं ।’ आन्दोलनको प्रसंगमा उनले भनिन् ‘अब फेरि लडाइँ–झगडा नहोस् । आन्दोलन नहोस् । शान्ति होस् ।’
मुस्तकिन त निकै आक्रोशित थिए । उनले भने, ‘शहीदको नाममा आएको सबै पैसा नेताहरूले खाएका छन् । फेरि किन आन्दोलन गर्ने ? आन्दोलनमा गरीबका छोराहरू मर्छन, नेताहरूलाई पद मिल्छ । पैसा कमाउँछ । नेताको छोरो अमेरिकामा पढ्छ, डाक्टर बन्छ । यता सोझा जनता मर्छन् । हडताल गर्न, कुटाइ खान किन जाने हामी ? अब फेरि कसैको रगत नबगोस् !’
अधिवक्ता हिम्मत सिंह पनि यतिखेर प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै अघि बढ्नु नै मधेसवादी दलको हितमा हुने बताउँछन् । ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको नखसोस् भन्नेमा मधेसवादी दल सचेत हुनुपर्छ । निरन्तरको आन्दोलनले मधेस कमजोर बन्दै गएको छ’, उनले भने । मलेठ झडपका एक प्रत्यक्षदर्शी कपिलेश्वर यादव राज्यको निरन्तरको उपेक्षाले पनि मधेस आक्रोशित बनेको ठान्छन् । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कपिलेश्वर यादवले प्रश्न गरे, ‘प्रचण्डसँग गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुने तर पहिलो मधेस आन्दोलन र त्यसयताका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने ? यसबाट पनि मधेसप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण प्रष्ट हुँदैन र ?’ घटक राजपाका नेता राजेन्द्र महतो भने मधेसलाई कुनै अधिकार नै प्राप्त नभएको बताउँछन् । निरन्तर आन्दोलन मात्रै गरेर शहीदको खेती कहिलेसम्म गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘शहीदको खेती त सरकारले गरेको छ । मर्ने आन्दोलनकारी त सधैं निर्दोष हुन्छ नि !’
सरकारमा जानुभयो, त्यहाँ हुँदा चाहिं तराईका मुद्दा किन ओझेल पर्छन् ? उनले थपे, ‘सरकारमा रहँदा पनि हामीले आवाज उठायौं । मैले बोल्दा मन्त्री भएर यस्तो बोल्ने ? भनेर पुत्ला जलाइयो । शरतसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा नै दिनुप¥यो । त्यसैले संविधान संशोधन भएर मधेसका माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिन्न ।’
#Breaking #Featured #Headline1